[Monday, January 14th, 13] :: Denmark oo si wanaagsan looga dareemay joojinta Qaadka ee Holland.
Holland oo ahayd irida ugu wayn ee qaadka looga soo galinjiray wadanka Denmark ayaa dhawaan si buuxda u joojisay Qaadkii soogali jiray dalkeeda. Isla markiiba waxaa laga dareemay suuqa iibka Jaadka ee dalalka Yurub ee uu jaadku mamnuuca ka yahay balse koontarabaan ahaan loo soo gallin jiray sida Denmark, Jarmalka ,faransiiska iyo Sweden.
Qaadka ayaa ilaa hada aan laga mamnuucin dalalka Ingriiska iyo Osteriya .
Boliiska Denmark oo si wanaagsan u dareemay joojinta qaadka , ayaa sheegay in ay hada dhib badnaandoonto soo gallinta Qaadka ee wadanka Denmark,
taas oo ay ku tilmaameen mid rajo beel ah in Qaadku si joogto ah u soo galo Denmark .
Inta badan dadka soomaalida ee Denmark ku nool ayaa soo dhaweeyay joojinta Qaadka.
iyagoo sheegay in uu dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba u burburiyay .
Warbixintii ay saxaafada Denmark ka qortay joojinta Qaadka oo af Denish ku qoran.
Læs også: Skatteminister afviser kritik af narkobekæmpelse
Læs også: LA: Legaliser hash og løs toldproblem
Radio Hormuud office Kolding